Masha Fokina - को युक्रेनी सांगीतिक बादल मडारिरहेको नयाँ तारा
गायक Masha Fokina यसलाई देखा जहाँ, जहिले पनि र जहाँ पनि, ध्यान को केन्द्र मा स्थित छ। उनको विशाल आकर्षण, बलियो करिश्मा, एक दुर्लभ प्रतिभा र उत्कृष्ट उपस्थिति केही मानिसहरू indifferent बाँकी छन्। समकालीन पप को बादल मडारिरहेको यो तारा कहाँ गरे?
Masha Fokina: जीवनी तारा
हाम्रो कथा को हेरोइन कीव मा जन्म भएको थियो मार्च मा6देखि प्रारम्भिक बाल्यकाल धेरै सक्रिय साबित भएको छ र बहुमुखी केटी विकास, 1986। त्यो खुसीसाथ गायक दल मा गाए र अंग्रेजी कक्षाहरू प्रेम गर्नुभयो। नृत्य हल नृत्य को गम्भीर रुचाउनु एक लामो समय को लागि।
तर, यस्तो कडा व्यक्त बावजुद रचनात्मकता, स्कूल पछि रोमान्टिक केटी एक बरु mundane पेशा रोज्ने र विदेशी व्यापार विभाग गर्न आउँछ। तथापि, यो पूरा र सकिनँ छ। थप insistently कल नै asserts, र एक जवान Masha Fokina अकादमी कर्मचारी, संस्कृति र कला लागू गर्न आमाबाबुको एक गोप्य समाधान। लिइरहेको को Abiturientku सक्षम, र त्यो सफलतापूर्वक निर्देशक सिकेका।
एकै समयमा तिर, त्यहाँ एक बैठक Masha र निर्माता दिमित्री Klimashenko थियो। दिमित्री उनको कुक गरेको मुग्ध पार्ने संगीतको मद्दत गर्छ केटी गरेको प्रतिभाशाली vocalist विचार गर्नुहोस्। शीर्षक गीतहरूको को एक "Proud" Fokin एक क्रिसमस दान कन्सर्ट मा जनवरी 2006 मा प्रदर्शन। यो प्रदर्शन गायक बीस वर्ष को debut थियो र उनको उत्कृष्ट घण्टा थियो। Masha साधारण केटी सुत्थ्यौं, र अर्को दिन प्रसिद्ध उठेँ। "Proud" गीत तुरुन्तै देश भर फैलाउन र एक हिट भए।
एउटै नाम अन्तर्गत एक वर्ष पछि आफ्नो debut एल्बम Masha Fokina जारी। उहाँले 12 सम्म रेडियो स्टेशन को हावा नछोड धेरै जो गीतहरू, संयुक्त। क्लिप6को रचनाहरूको मा हटाइएको छ। यो सबै "4 राजा", "ताराहरु", "चुम्बन", "म तपाईं भूल छैन" र अरूलाई ज्ञात छ। यी काम अन्तिम को निर्माता चिरपरिचित संगीत भिडियो निर्देशक modernity थिए एलन Badoev। यो मानिस, साथै डिजाइनर ओल्गा Navrotskaya धेरै रचनात्मक छवि Fokina गरेको र साँच्चै तारकीय हाइट्स बाटो मा उनको मदत गरे।
उडान को नयाँ राउन्ड
तर सफलता को मुख्य घटक -, को पाठ्यक्रम, छ, मिसिन प्रतिभा, उनको sociability, खुलापन सेक्सी र रोमाञ्चक। यो poluvzglyada शाब्दिक प्रशंसक ल्याउन पागल पूर्ण कब्जा। प्रेम र रोमान्स, दुखाइ र आनन्द, र शोक ... गायक विधाहरू विभिन्न मा सजिलै फिट - - उनको गीतहरू सबै छ डिस्को बाट गम्भीर उदास नृत्य संगीत।
2009 मा, Masha Fokina जसको फोटो यस लेखमा देख्न सकिन्छ, उनको निर्माता एउटा सम्बन्ध तोड्न निर्णय र «गोप्य SERVIS» एजेन्सी संग सहयोग सुरु हुन्छ। सहयोग को फल युक्रेनी चार्ट को शीर्ष मा थियो कुन एक सुपर हिट "एकल, बच्चा!", भयो। एकल पछि जारी "सुपर Masha", पनि धेरै सार्वजनिक मन मा थियो छ।
आज Masha Fokina जीवनको प्रमुख र महिमा को शिखर मा छ। यसको मूल्य युक्रेनमा मात्र घर मा छैन, तर पनि विदेश। रूस मा, यो पनि प्रशंसक एकदम धेरै छ। उदाहरणका लागि, एक गायक Iosif Kobzon उत्साही र चिरपरिचित सबै दुनिया Sonique भन्दा।
अभिनेता Devid Tyulis: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन। शीर्ष चलचित्र
इवान Habensky छोरा Konstantina Habenskogo
"Gazprom" Alexey मिलर को टाउको: जीवनी, परिवार फोटो
Rodion Gazmanov: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
Byanka Dzhagger - शैली प्रतिमा र मानव अधिकार कार्यकता
महिला मा पीडादायी urination - एक डाक्टर हेर्न एउटा कारण
मानव स्वास्थ्य कसरी हानिकारक कम्प्युटर प्रभाव
ग्रीवा cervicitis: विवरण, कारणहरू, लक्षण र उपचार
दबाइ "को बोल" - मिर्गी लागि चिकित्सा
Kyocera एफएस-1040: उत्कृष्ट विशेषताहरु संग प्रवेश-स्तर मुद्रक
सुनको सबैभन्दा मूल्यवान प्रकार
कला को दुनिया मा नि: शुल्क सास - एक मचान को शैली मा चित्रहरु
इङ्गल्याण्ड को कुकुर रानी: नस्ल, फोटो
Guram Bablishvili - मेल मनपर्ने Georgians सुरक्षित